Bobrisky Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
musha Africa Bobrisky Nyaya Yehucheche Nyaya pamwe neS Untold Biography Chokwadi
CB inopa Nyaya Yakazara yeNaija Celeb inozivikanwa iine zita rizere "Okuneye Idris Olarenwaju".
Yedu Bobrisky Childhood Nhau pamwe neS Untold Biography Chokwadi inounza kwauri nhoroondo yakazara yeanozivikanwa ezviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino.
Ehe, munhu wese anoziva kuti iye ane mukurumbira transgender hunhu muNigeria. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga Bobrisky's biography iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Bobrisky Yehucheche Nyaya - Hupenyu hwepakutanga uye Mhuri kumashure:
Okuneye Idris Olarenwaju akazvarwa mu1992 kuEbutte-meta, nyika yeLagos kuvabereki vake vane mazita achiri kufanira kuongororwa kuruzhinji nevakakurumbira nekuda kwezvikonzero zvinonyanya kuzivikanwa kwaari.
Ndiye wekupedzisira pavana vakawanda vakazvarwa mumubatanidzwa pakati paamai vake vanononoka nababa vake.
Sei "Iye" uye kwete "Wake"?… Bobrisky anga asimbisa mu2019 mushure mekugamuchira akati wandei makomendi pane rake Instagram nhoroondo kuti zvisazitasingwi zvakakodzera kushandiswa kumuziva ndi "iye" na "iye".
Nyika yeNigerian yekumadokero-kweAfrica dzinza rakazvarwa mumhuri yechiIslam nemhuri yemidzi yakateerwa kudunhu rekumadokero kweYoruba muNigeria.
Akakurira kuEbutte-meta, Lagos pamwe nevanun'una vake vane mazita achiri kuda kutaurwa pane epanhau rezvemagariro kubvira paakasimuka mukurumbira.
Kukura paEbutte-meta, Bobrisky aida kuratidza maitiro emusikana. Aigona kutevedzera echikadzi nzira yekufamba kana kutevedzera izwi remusikana.
Kufarira kwake mukadzi kana mukadzi kwakatanga kuvhundutsa amai vake avo vanogara vachimurova senzira yekugadzirisa hunhu hwake hunopesana nemitemo yeNigeria.
Bobrisky zvakare aive nedzidzo yepamutemo. Waanodzidza naye kuchikoro chepuraimari akaongorora kuti Bobrisky aigara achizvibata semukadzi akasungwa mumuviri wemurume mumazuva avo epuraimari.
Akaenda kuKing's College uko kwaakatora chitupa chake chesekondari.
Mushure mekupedza kudzidza kuKing's College, akanyoresa kuYunivhesiti yeLagos nyika kwaakawana degree rake muAccounting.
Ndichinyoresa kuYunivhesiti, Bobrisky, akazvimisikidza semutambi akanaka, muimbi wekugadzira uye choreographer zvese izvi zvaive zvakasarudzika zveMukadzi panguva iyoyo kuNigeria.
Bobrisky Yekutanga Biography - Hupenyu hweBasa:
Paakanga achiri kudzidza kuLagos State University, Bobrisky aigona kutora nguva yekugadzira mavhidhiyo ake ekutamba nekuaisa pane rake rezvenhau peji.
Dzimwe nguva, Bobrisky aigona kutopfeka hembe dzechikadzi ozvishandisa kugadzira mavhidhiyo aanowanzoisa pasocial media. Mavhidhiyo ake akazova hurukuro yeguta muNigeria sezvo yakaenda muhutachiona munaGumiguru 2016.
Makore mashoma apfuura vhidhiyo yakaonekwa ichiburitsa pachena kuti Bobrisky akabviswa sei hanzu dzevakadzi uye zamu rekunyepedzera - maviri masaga emvura - aaiisa.
Mavhidhiyo aBobrisky akamutsa kukakavara kwakawanda uye kuda kuziva pakati peveruzhinji, zvichiita kuti vezvenhau vashande mamaira ekuwedzera chakavanzika chiri kumashure kwehunhu hwake.
Bobrisky Bio - Mugwagwa Kune Mukurumbira Nhau:
Akaenderera mberi nekuchenesa ganda rake achichinja ruvara kubva pane yaro yepakutanga nhema kuti ive chena uye akaisa akateedzana emifananidzo yake achiratidza ake matsva pane eruzhinji.
Bobrisky akawana akateedzana ekushoropodzwa nevanhu vekwavo nekuda kwechitarisiko chake chitsva, chipfeko chemukadzi, uye hunhu.
Akabatwa zvisina kunaka nevamwe vakuru muNigeria nekuda kwekuti maitiro ake nemararamiro ake hazvienderane nekodhi yemafambiro uye hunhu hwenyika yake.
Akanzwa kusanetsekana nezvemaonero evanhu uye akatofunga kupushira kuvhiya kwema transgender kuti azvishandure zvizere ave mukadzi. Kunyangwe iye akawana chaiko huwandu hwakawanda hwevateveri, iye achiri kutambudzwa nezviremera zvinoverengeka munyika yake. Mu2019, Director-General weNigeria's National Council for Arts and Culture akadana Bobrisky "chinonyadzisa chenyika" uye akavimbisa kuti achabatwa noutsinye kana akabatwa mumugwagwa.
Bobrisky Rise Kuenda Mukurumbira Nyaya:
Pakati pekukakavadzana uku, Bobriksky akaburitsa papeji rake reSnapchat kuti ane chakavanzika bae uyo anga achinzi akamutsigira mari. Aive akaisa mifananidzo yemamwe mari - # 7 miriyoni - padivi peBenz yaaiti akapihwa neakavanzika bae. Her Snapchat ikozvino inogamuchira vanopfuura 22,000 vashanyi pazuva panguva yekunyora.
Achimhanyisa kumberi kusvika panguva yekunyora, Bobrisky anokakavara muNigerian-akapfeka uye transgender pamwe namuzvinabhizimusi anozivikanwa nekirimu yake inozivikanwa yekuchenesa inonzi "Bob Whitening Cream" iyo yakaita kuti azivikanwe mhiri kwemakungwa uye yakwezva vatengi vepasirese. Vamwe vose, sezvavanotaura, inhoroondo.
Bobrisky Hukama Hupenyu Chokwadi:
Nezve chimiro chake chehukama, Bobrisky achiri kuzoroora panguva yekunyora. Tinokuunzira chokwadi nezve ake ekufambidzana chinzvimbo uye ikozvino hukama hupenyu. Akange aburitsa pachena paSnapchat yake kuti ane mudiwa - wake wakavanzika bae - uyo anofungidzirwa kuve wechirume. Hazvina zvakawanda zvakaratidzwa pamusoro pehukama hwake neakavanzika bae.
Bobrisky anga ari muhukama hwepedyo zvakanyanya nenziyo inozivikanwa yemuvhi, Tonto Dikeh. Akanga ataura rudo rwake rusingaperi kuna Tonto Dikeh pane akati wandei uye akange azivisa kuti haazi ngochani uye haana chinangwa chekusvetukira kudanana naTonto Dikeh.
Bobrisky Hupenyu Hwemhuri Hupenyu:
Bobrisky anorumbidza kubva kubva yepakati-yemhuri mhuri kumashure. Tinokuunzira chokwadi nezvehupenyu hwemhuri yake.
Nezve baba vaBobrisky naamai:
Hapana ruzivo rwakawanda rwunozivikanwa nezvaamai vaBobrisky nababa vake sezvo akachengeta ruzivo nezvevabereki vake zvakavanzika. Amai vaBobrisky vaisafarira hunhu hwake hwechikadzi uye vaigara vachimurova pese paanoedza kutevedzera kana kuratidza maitiro emusikana. Amai vake vakafa muna 2008 baba vake vachiri vapenyu uye vachigara zvakanaka zvichitevera kuramwa kwaakaita basa mubhizimusi rake rekutakura.
Nezve hama dzaBobrisky:
Kunyangwe Bobrisky anga aratidza kuti ndiye mwana wekupedzisira wemhuri yake, haana kutaura mazita ehama kana hanzvadzi kubva pakumuka kwake mukurumbira. Mushure mekuziviswa kwenyaya yekuti atanga kuenda kumwedzi mushure mekuvhiyiwa kwake transgender, akatumira mifananidzo yemukoma wake nehanzvadzi pamhepo.
Hapana ruzivo rwakawanda rwunozivikanwa pamusoro pasekuru naambuya vaBobrisky pamwe nasekuru vake nasekuru nasekuru. Zvakare, kwanga kusina magwaro epamutemo kana kutaura pamusoro pababamunini vake, vanatete, babamunini, babamunini, nasekuru.
Bobrisky Hupenyu hwepamoyo:
Kuti ugone kugutsa kuda kuziva nezve hupenyu hwepamoyo hwaBobrisky, tinokuunzira chokwadi chehunhu hwake kuti akubatsire kuwana pikicha yakajeka yake. Kutanga, Bobrisky haana hanya nemafungiro evanhu maererano nesarudzo dzake dze transgender. Kunyangwe iye asina kana hanya nemaonero evanhu, anogara achivimbisa kuti anodzokera kune izvo zvinogara zvichimunetsa.
Kunze kwebasa rake rebhizinesi, Bobrisky akange atora zvido nezvipenga pakutamba. Aive aratidzira hunyanzvi hwake hwekutamba mumapati akasiyana uye haatombopi mukana mukana wekuratidza kuti akanaka sei kana zvazove zvakakodzera kupfeka shangu dzake dzekutamba.
Kutevera kuzivisa kwake zvemari panhau yemagariro, Bobrisky akakosha mari inofungidzirwa ye #75 miriyoni panguva yekunyora. Kwaakabva hupfumi hwake kunoumbwa zvikuru nekuumba kwake bhizinesi, pamwe nemamwe matanho ekushambadzira nekuongorora mashandisiro ake, zvinoratidza kuti anorarama hupenyu hwoumbozha.
Bobrisky anga atenga imba yekurara mishanu mudhorobha reLekki Peninsula yeLagos mu2017. Akaenda papeji rake reSnapchat kuratidza zvikamu zvakasiyana zvechivakwa uye akataurawo kuti akange ashandisa mari inofungidzirwa yemamirioni gumi nemaviri pachivako. kushongedzwa kwemukati. Bobrisky zvakare ane mota nhatu dzekunze dzinoti; Range Rover, Mercedes Benz uye Lexus.
Bobrisky Untold Chokwadi:
Kuputira yedu Bobrisky nyaya yehudiki uye Biography, hezvino zvimwe zvishoma kana zvisingazivikanwe chokwadi pamusoro pomuchinjiro-mupfekedzi uyo anokubatsira iwe kuti utore mufananidzo wakazara wake.
Bobrisky akaberekerwa mumusha wechiIslam asi haaite zveIslam. Kunyangwe akazvarwa kumhuri yeMuslim, Bobrisky anoda kuenda kuChechi.
Akaburitsa pachena kuti chikonzero chake chekusatenda chiIslam ndechekuti aifanirwa kugadzira kumeso kwake kashanu zuva rega rega mushure mekuita tsvina uye anozviona zvichishungurudza.
Wechirume wekuNigeria Barbie, Bobrisky, akaisa tattoo pabendekete rake rekurudyi. Akatora peji rake Instagram kuti aratidze tattoo yake nemufananidzo apo achiyemura yake nyowani nyowani.
Bobrisky akagamuchira zita remunhurume Akapfeka zvekunakisa pamuchina wake uye pasina nguva akava nyeredzi yekampasi yake achidzidza paUniversity yeLagos, Lagos state Nigeria.
Thanks for reading vedu Bobrisky Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At biography yemwana, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!
Yeudiki Biography Diary- yeNIGERIAN INTERNET PERSONALITIES